फुन्छोलिङ्ग - विकिपिडिया
फुन्छोलिङ्ग (जोंगखा: ཕུན་ཚོགས་གླིང་, /pʰyn.tsʰogs.gliŋ/) दक्षिणी भुटानको एक सीमावर्ती शहर हो। यो भारतिय सहर जयगाउँको छेवैमा छ। यो छुखा जोखाङ्गमा पर्छ। भूटानको सीमा पार व्यापारको यो प्रमुख नाकाले स्थानीय अर्थव्यवस्था र सम्पन्नतामा प्रभाव पारेको छ। यो सहरले केन्द्रिय बैङ्कको प्रधान कार्यालयको रूपमा सेवा गर्दछ। २००५को जनगणना यो सहरको जनसङ्ख्या अनुसार २०,५३७ छ।
पुग्न सकिने नै सडक मार्गबाट मात्र, सहर प्रमुख भारतीय रेल नेटवर्क न्यू जलपाईगुडी,को भागसँग जोडिएको छ। पश्चिम बङ्गालको उत्तरी सहरहरूबाट, फुन्छोलिङ्ग जान जोसुकैले कुनै स्थानीय बस टर्मिनलहरूबाट बस लिनु पर्ने छ। भारतीय र भूटानी दुवै सरकार संचालकद्धारा चलाए जाँदैछन्। यात्राको समय लगभग ६-८ घन्टा छ। 
भुटानबाट देखिने, भुटान र भारत बिच सुसज्जित सिमा द्वार्।
दायाँ: फुन्छोलिङ्ग. बायाँ: जयगाउँ. सिमा द्वार् प्रिष्ट भुमिमा देखिन्छ।
सीमानाको बारपारमा संस्क्रितीमा प्रष्टरूपमा भिन्नता छ, जुन एउटा तिब्बती शैलीको द्वार भएको लामो पर्खालले छुट्याएको छ। कहिले काँही स्थानीय मानिसहरू कागजात बिना पार गर्न पनि सक्छन, तर भारतीय पासपोर्टको बिनाको घुमुवाले पंजीकृत टूर गाइडद्धारा प्रस्तुत भिषा आबश्य ठान्दछ। द्वार भूटानी सेना गार्डद्धारा ब्यबस्थित गरिएको छ। द्वार पछि भुबनौट घटदो छ।
सीमाले स्पष्ट रूपले एकदमै भिन्न दुई संस्कृति र मानिसलाई अलग गर्छ। जयगाउँ हलचल र कोलाहलपूर्ण छ,पश्चिम बङ्गाल अरु ब्यबसायीक केन्द्रहरूको समान, भिन्न धेरै स्पष्ट देखिने भूटानी पसलेसंग। फुन्छोलिङ्ग अन्य भूटानी सहरहरू भन्दा नौलो रूपमा शहरी छ, छिमेकी संस्कृति अवशोषित गरेको, तर स्पष्ट रूपमा धेरै शान्त र आफ्नो छिमेकी भन्दा व्यवस्थित। सामान्य रूपमा उपग्रह तस्वीर हेर्दा, जयगाउँ साना घरहरूले भरिएको छ, जबकि फुन्छोलिङ्ग पंक्तियहरूमा राखिएको ठूला भबनको अधिपत्यमा परेको छ। फुन्छोलिङ्ग नेपाली शरणार्थी लागि बनेको भूटानको आवास परियोजनाको संचालक पनि हो।
भूटानमा जाने किनबेच गरिएको धेरै जसो मालसमान छ, र यो भूटानमा भारतीय बजारलाई सजिलै पुग्न सकिने रूपमा स्वागत गर्ने, जयगाउँ धेरै ठूलो छ र धेरै घुमुवा प्राप्त गर्दछ। सबै भारतीहरूको लागि भूटानमा प्रवेश स्वतन्त्र छन्, र मुद्रा (जो वास्तवमा समतुल्य) समान रूपले व्यवहार गरिन्छ। भारतीय रूपयाको नोट्स भूटानको लगभग हरेक ठाउँ स्वीकार गरिन्छ।
थिम्पूको लागि सडकसम्पादन
सहरको लगभग जहासुकै ठाउबाट पनि, पहाडी भागमा सर्प जस्तो जेलिएको रूपमा थिम्पु जाने बाटो जोसुकैले देख्न सक्छ, र रातीको समयमा राजधानी तिर बढिरहेको टाढाकोको अगाडिको बत्ती सजिलै देख्न सकिन्छ। ठूलो मैदान पीएसएको पछाडी सडक छ जसले भूटानको बाँकी सहरहरूलाई जोडदछ।
ढाँचा:भूटान सम्बन्धि ठूटो
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=फुन्छोलिङ्ग&oldid=902890" बाट अनुप्रेषित